China Environmental kuchengetedzwa kwekunze kushongedza kuri nyore kuisa huni mapurasitiki WPC handrail vagadziri uye vanotengesa Lihua
Environmental kuchengetedzwa kwekunze kushongedza kuri nyore kuisa huni mapurasitiki WPC handrail
Zvigadzirwa Muridzi:WPC handrail
Mubhadharo:TT / LC
Ruvara:Kofi, Chokoreti, Wood, Red Wood, Cedar, nhema, Grey, nezvimwe
Kutumira Port:Shanghai Port
Lead nguva:15-25 MAZUVA
2.2m, 2.9m, 3.6m kana yakagadziriswa
Paki, gadheni, gomo zambuko
Smooth, Brushed, Super nekusimbisa, nebefu
Rutsigiro rwepamhepo rwepamhepo
Grey, kofi, chokoreti, ceder, nezvimwe
●WPC handrail zvinowanzoshandiswa mupaki zambuko uye gomo zambuko
kuchengetedza kuchengetedzeka kwevanhu. Tine akawanda masitaera eWPC handrails kugutsa vatengi zvakasiyana zvinodiwa. Zvakare neakasikwa huni zviyo dhizaini uye kubata, izvi zvinogona kusangana zvakasiyana siyana zvinodiwa nevatengi. WPC handrails ane akanaka anoyevedza dhizaini uye kugadzirisa zviri nyore zvipembenene zvinodzivirira uye kukwirira kuomarara. Zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvinogadziriswazve uye hapana imwe ngozi kemikari, kuchengetedza masango zviwanikwa Zviri nyore kuisa & yakaderera yevashandi mutengo.Hapana kupenda, hapana glue, yakaderera kugadzirisa.
● Tine fekitari yedu pachedu, ruvara uye saizi zvinogona kuenzaniswa nesarudzo yako. Ndapota inzwa wakasununguka kubvunza isu.
Pashure: Kunze kwemvura isina mvura 130x10mm huni epurasitiki inoumbwa neWPC yekunamatira pamadziro
Zvadaro: Mamiriro ekunze Kuramba Kunze Kwehuni Musanganiswa WPC Hollow Decking
Kuiswa dhayagiramu yeLishen mapurasitiki huni guardrail kurodha pasi
Q1: yakareba sei chakuvhuvhu yako kushanda zvakajairika? Nzira yekuchengetedza sei zuva nezuva? Ndeapi masimba eimwe neimwe seti yeanofa?
A: Kazhinji mumwe chakuvhuvhu anogona kushanda mazuva 2-3, isu acharamba nayo pashure mumwe hurongwa, vanokwanisa neimwe seti zvakasiyana, nokuti zvakajairika mapuranga rimwe zuva 2.5-3.5ton, 3D Mabhuku eBraille zvigadzirwa zviri 2-2.5tons, co- extrusion zvigadzirwa ndeye 1.8-2.2tons.
Q2: Ndeipi yako yekugadzira maitiro?
A: 1.Iva nechokwadi chekuwanda uye ruvara rweodha nemutengi
2.Artisan gadzira fomura uye gadzira muyenzaniso yekusimbisa iyo ruvara uye mushure mekurapwa nemutengi
3.Then gadzira iyo granulation (Gadzirira izvo zvinhu), zvobva zvatanga kugadzira, zvigadzirwa zve extrusion zvichaiswa munzvimbo chaiyo, gare gare tichaita mushure mekurapwa, tobva tazvipeta izvi.
Q3: Inguvai yakajairwa nguva yekuendesa yezvigadzirwa zvako?
A: Zvichava zvakasiyana zvinoenderana nehuwandu. Kazhinji zviri zvemazuva 7-15 kweimwe 20ft mudziyo.If 3D embossed uye co-extrusion zvigadzirwa, isu tinoda mazuva 2-4 zvakanyanya kazhinji seyakaomarara maitiro.
Q4: Iwe unayo mashoma odha huwandu? Kana zvirizvo, chii chiri chidiki odha huwandu?
A: Kazhinji isu tine hushoma huwandu, iri 200-300 SQM Asi kana iwe uchida kuzadza mudziyo kusvika pachiyero uremu, zvimwe zvigadzirwa zvishoma tichavaitira iwe!
Q5: Ndeipi yako yakakwana huwandu?
A: Kazhinji kugona kwedu kwakazara matani chiuru pamwedzi.Sezvo isu tichiwedzera zvimwe mitsara yekugadzira, izvi zvichawedzera munguva inotevera.
Q6: yakakura sei kambani yako? Ndeipi iyo inobuda pagore kukosha?
A: Lihua ndiyo yepamusoro uye Nyowani Tech Enterprise, inofukidza ne15000 sq metres chirimwa muLangxi Indusrial Zone.Tine vashandi vanopfuura makumi masere, avo vese vane rakanakisa WPC nzvimbo inoshanda ruzivo.
Q7: Ndeapi midziyo yekuyedza iwe yaunayo?
A: Fekitori yedu ineMechanical pfuma tester, Moto-ratting tester, Anti-slip tester, Kurema, nezvimwe.
Q8: Chii chako mhando maitiro?
A: Munguva yekugadzira, yedu QC ichaongorora saizi, ruvara, kumeso, mhando, ipapo ivo vanowana chidimbu chemuenzaniso kuti vaite zvemishini chivakwa bvunzo. Zvakare QC ichaita mushure mekurapa kutarisa kana paine rimwe Invisible dambudziko mairi. .Kana vari kuita mushure mekurapwa, vanozoongororawo mhando.
Q9: Chii chinonzi chigadzirwa chako? Zvakawanikwa sei?
A: Chigadzirwa chedu chigadzirwa chinopfuura 98%, nekuti isu tinodzora mhando pakutanga, kubva pakutanga kwechinhu, ivo QC vanozodzora mhando painogadzirwa, zvakare mhizha inoongorora nekugadzirisa fomula nguva dzose.
Q10: Inguva yakareba sei basa rehupenyu hweWPC zvigadzirwa?
A: Zvinenge makore makumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu pasi pemamiriro akanaka.
Q11: Ndeipi nguva yekubhadhara yauchazogamuchira?
A: Kubhadhara nguva ndeye T / T, Western Union zvichingodaro.
Q12: Kufananidza nehuni, ndezvipi zvakanakira WPC zvigadzirwa?
A: 1, zvigadzirwa zveWPC zvine hushamwari zvakatipoteredza, ndeye 100% inogadziriswazve.
Chechipiri, zvigadzirwa zveWPC hazvina mvura, hunyoro-chiratidzo, mothproof uye anti-mildew.
Chechitatu, zvigadzirwa zveWPC zvine simba rakakwira, kusakara kusakara uye kubvaruka, iko kusiri-kuzvimba, hapana deformation uye haina kuputswa
WPC Handrails For Masitepisi Interior
Super nekusimbisa, nebefu Waterproof Wood Plastic WPC Holl ...
Outdoor Fireproof Wood hwoupenyu WPC Hollow Dec ...
Outdoor Water Park Waterproof hwoupenyu WPC Dec ...
Outdoor isapinda 130x10mm huni epurasitiki compos ...
Environmental Friendly Outdoor Wood hwoupenyu W ...
UV-nemishonga Easy Installation Wood rinoumba ...
WPC yekunze decking, WPC decking uriri, Kunze WPC decking, WPC uriri, huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC rinoumba decking,